घरमा कसरी बाह्रैमास ढकमक्क फूलहरु फूलाउने ? |
Home जीवनशैली घरमा कसरी बाह्रैमास ढकमक्क फूलहरु फूलाउने ?
बिहान उठ्नसाथ ढकमक्क फूलहरु फुलेको देख्दा कस्तो हुँदो हो ? आफुले धेरै समय विताउने घर-आँगनमा रंगबिरंगी फूलहरु हावामा बयेली खेलिरहेको दृश्य कति मनमोहक हुँदो हो ?
फूलहरुमा भँमरा वा पुतलीहरु खेलिरहेको देख्दा कति रमाइलो हुँदो हो ? वास्तवमा फूलको सौन्दर्यले हामीलाई मोहित तुल्याउँछ । तनाव भुलाइदिन्छ । मनमा सकारात्मक उर्जा पैदा गरिदिन्छ । ढकमक्क फुलेका फूलहरुको सौन्दर्यले हामीमा खुसी संचार गराइदिन्छ । एक हिसाबले भन्ने हो यो प्राकृतिक उपचार पनि हो ।
आफु बसेको स्थानमा फूल रोप्नु, फुलाउनेको फाइदा यतिमा मात्र पनि सीमित छैन । फूलको सौन्दर्यले मनलाई आनन्दित तुल्याउँछ । खुसी ल्याउँछ । तनाव कम गर्छ । फूल रोपेपछि रेखदेख, गोडमेल, सिंचाई गर्नुपर्छ ।
यसले शरीरलाई सक्रिय बनाउँछ । फूल रोप्ने, स्यहार्ने क्रममा शरीर चलायमान हुन्छ । शरीरको व्यायाम हुन्छ ।फूल रोप्ने, फूलाउने कुराले हामीमा उत्साह ल्याउँछ । उत्साहले जीवनलाई उर्जावान् बनाउँछ ।
मन बहलाउने बाहना हुन्छ । दिक्क लागेको बेला, काममा मन नगएको बेला, मनमा अनेक कुरा खेलिरहेको बेला फूलहरु स्यहार–सुसार गरेर मनलाई शान्त तुल्याउन सकिन्छ ।